[ Jan 25, 2018 ] सत्यकथाः सौन्दर्य-दुःख
अन्जू अर्थात् मेरी बालसखी । सानैदेखि अचाक्ली राम्री । गुडिया जस्तै । उसको सुन्दरता देखेर भुतुक्क हुन्थेँ म । डाहा नै लागेर आउँथ्यो। अन्जूका बा–आमा गरिब रहेछन् । त्योबेला गरिब हुनुको…
[ Nov 25, 2017 ] लोककथा : यमलोकमा जिउँदो मान्छे
एउटा हात्ती नर्कलोक पुगेछ । गजराज र यमराजको बडो अपूर्व संगम भयो । यमराजलाई अचम्म लाग्यो । राँगो छोडेर अब यसकै सवारी गर्छु भन्ने सोच पलायो । सोचे–– मेरो पर्सनालिटीअनुसार यसको ज्यान पनि छ । निकैबेर…
[ Nov 18, 2017 ] कथा : पहेंलो गुलाफ
दुई महिनादेखि मैले केही लेख्न सकेकी छैन । डायरीका यी रित्ता पानाहरू जति पल्टाउँछु, उत्ति मनभित्रको खाली झन् झन् बढ्दै गएजस्तो लाग्छ । कस्तो खाली हो, म आफैं पनि जान्दिनँ । म दुब्लाइसकें, थुकसित कहिलेकाहीँ रगत…
[ Nov 18, 2017 ] कथा : पल्सर पुछ्ने केटी
ऊ मायाले औँलाहरू खेलाउँथी, पल्सरका अंगअंगमा । काम सकिँदा चम्कन बाँकी कुनै ठाउँ रहन्थेनन् । जब काम गर्थी, एउटा योग्य पियानोवादकले झैँ औँलाहरू चलाउँथी । म निर्निमेष हेरिरहन्थेँ । पुछिसकेपछि ऊ एकचोटि मोटरसाइकलमाथि चढ्थी । आहा ! उसको दिनकै सर्वोत्तम खुसीको समय होला त्यो । थाहा छैन, पल्सरमाथि…
[ Nov 04, 2017 ] कथा: विमान दुर्घटनामा परेपछि
अचम्म, सधै जसो ढिला भइरहने आन्तरिक उडानको हवाइजहाज अन्ततः निर्धारित समयमा नै उड्ने भयो। एयरहोस्टेसको निर्देशन पछि शान्त भएको जहाजले ठूलो आवाज निकाल्दै तिव्र गतिमा जमिन छाड्यो । मलाई सबैभन्दा बढी डर लाग्ने भनेको यही बेला हो ।…
[ Nov 04, 2017 ] मेरो चोकको वीरु
तपाईंहरूले कहिल्यै आफ्नो बुवाको पुराना लुगा राखेको दराज खोल्नुभएको छ ? मैले खोलेकी छु । अनि कहिल्यै ती पुराना लुगामध्येकै झुन्डिएका प्यान्टहरु हेर्नुभएको छ ? लगाउँदा घरै बढार्ने जस्ता, कुचो नचाहिने जस्ता । बेली-बटन भन्छन् शायद । बुवाले भन्नुभएको–…
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीले भने : प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ